Ụdị Uwe Akpụkpọ anụ na Ọdịdị Na-ahụkarị
Anya Arts Basics
Nkọwa Foto nke Nwepu Uwe na Ụdị
Chọgharịa ntanetị anyị na Foto nke Uwe Azụ iji mụta banyere ụdị ụlọ na ụdị. Nakwa mụta banyere ụlọ obibi dị mma na nkọwa, ma chọpụta ihe ụlọ gị na-ekwu maka ụdị ụlọ gị.
Owuwu Ulo Ochie Na Ulo na Lithuania. Photo site De Agostini / W. Buss / Getty Images (aka)
Ụdị ụlọ elu kachasị ewu ewu nwere ike ịbụ ụda dị n'akụkụ, n'ihi na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe iji wuo. Ihe ndị dị na ụlọ a na-eche ihu, ya mere, mkpọda nke ụlọ dị n'ihu na n'azụ. Osisi ahụ bụ ebe a na-etinye ihe ntanetị nke etinyere elu. Ulo elu elu nwere ihu igwe n'ihu ụlọ. Ụfọdụ ụlọ, dịka omenala ndị kachasị mara mma, nwere maọbụ n'akụkụ na n'ihu. N'agbanyeghị echiche ndị a na-ewu ewu, ụlọ elu ahụ abụghị ihe American mepụtara. Ụlọ e gosiri ebe a bụ na Zemaiciu Kalvarija, Lithuania.
Na United States, a na-ahụkarị ụlọ elu dị n'akụkụ American Colonial, Georgian Colonial, na ụlọ obibi Revival Colonial.
Oko Roof, ma ọ bụ Ulo elu
Nkọwa Foto nke Roof Styles: Hip Roof Lafitte's Blacksmith Shop, narị afọ nke 18 nke French, na French Quarter, New Orleans, LA. Foto nke Klaas Lingbeek- van Kranen / E + Collection / Getty Images
N'ihe dị ka narị afọ nke iri na asatọ, French French Provincial blacksmith (ugbu a, ụlọ ahịa) nwere ụlọ elu na ndị na-ehi ụra. Hụ onwe gị na Quarter French nke New Orleans!
Ugwu (ma ọ bụ gbagoo) elu ụlọ ruo n'ugwu dị n'akụkụ anọ, na-akpụ "ogwu". Onye na-ekpuchi ụlọ ga-eme ka mkpọsa n'elu ebe a. Ọ bụ ezie na ụlọ elu na-adịghị ekpuchi, ọ nwere ike ịnwe mmiri ozuzo ma ọ bụ ikuku na-ejikọta ya na osisi.
Mgbe ụlọ ahụ dị okpukpu, a na-eme ka mkpuchi elu dị n'elu, dị ka pyramid. Mgbe ụlọ ahụ bụ akụkụ anọ, ụlọ elu ahụ na-eme ka ụlọ elu dị n'elu. Uwe elu ụlọ enweghị ihe ọ bụla.
Na United States, a na-ahụkarị ụlọ elu na French- Ụlọ ndị nwere ume , dịka French Creole na mpaghara French; Amụma nke America; na Neocolonials nke Mediterranean.
Ọdịiche dị n'ụdị Uweeji Hip kpuchie Pyramid Roof, Pavilion Roof, Half-hipped, ma ọ bụ Jerkinhead Roof, na ọbụna Mansard Roof.
Nkọwa Foto nke Edemede Uwe: Mansard ma ọ bụ French Style Roof The Old Executive Office Building, nke a na-akpọ Dwight D. Eisenhower Building, na Washington DC. Foto © Tom Brakefield / Getty Images
Ụlọ nke abụọ nke Alaeze Ukwu Eisenhower Ewuwu Ụlọ Ọrụ na Washington DC nwere nnukwu ụlọ elu nke mansard.
Ulo elu nke ulo mmadu nwere uzo abuo na nke obula. Ndago ala dị nnọọ elu nke na ọ nwere ike ịdị ka mgbidi na-ahụ anya na ndị dormers . Oghere elu ahụ nwere obere pitch, ọ dịghịkwa mfe ịhụ ya n'ala. Ulo elu ulo mmadu enweghi ihe ndi ozo.
Okwu a bụ "mansard" sitere n'aka onye France bụ François Mansart (1598-1666) nke Beaux Arts School of Architecture na Paris, France. Mansart nweghachiri mmasị na ụdị ụlọ a, bụ nke e ji mara ụlọ ọrụ French Renaissance, ma jiri ya mee ihe na Ngalaba Louvre na France.
Mgbanwe ọzọ nke mansard ụlọ dị na 1850, mgbe Napoleon nke atọ wughachiri Paris. Ejiri ejiji a na oge a, a na-ejikarị okwu Ememe nke Abụọ kọwaa ụlọ ọ bụla nwere ụlọ elu.
A na-eleba ụlọ elu anya dị ka ihe dị irè n'ihi na ha na-ahapụ ebe obibi ndị nwere ike ịbanye n'ime ụlọ elu. N'ihi nke a, a na-edozi ụlọ ndị toro eto na ụlọ elu ụlọ. Na United States, Alaeze Ukwu nke Abụọ - ma ọ bụ Mansard - bụ ụdị ndị Victorian, nke a na-ewu ewu site na 1860 ruo na 1880s.
Taa, a na-eji ụlọ elu ndị mmadụ na-eji oge ụfọdụ eme ihe n'otu ụlọ na ụlọ abụọ, ụlọ nri, na ụlọ Neo-eclectic.
Jerkinhead Roof na Harriet Beecher Stowe Ụlọ ke Hartford, Connecticut. Foto site na Carol M. Highsmith / Buyenlarge Archive Photos / Getty Images (cropped)
Ụlọ Harriet Beecher Stowe dị na Hartford, Connecticut nwere ihe ọ bụla a na-amanye.
Ulo elu a na-akwa akwa. Kama ịbịaru ruo n'ókè, a na-ehichapụ ụdọ ma na-egosi na ọ ga-agbada. Usoro a na-eme ka ọ dị ala, na-enwe mmetụta dị ala karịa ụlọ obibi.
A pụkwara ịkpọ ụlọ elu Jerkin Head Roof, Roof Half-hipped, Gable Clipped, ma ọ bụ ọbụna Jerkinhead Gable.
A na - ahụkarị ụlọ elu dị na Bungalows na ebe obibi ndị America , obere ụlọ ndị American malite na 1920 na 1930 , na ụdị ụlọ ndị Victorian dị iche iche.
"Jerkinhead" ọ bụ Okwu Dirty?
Okwu jerkinhead gosiputara na ndepụta nke 50 Okwu ahụ na-ada ụda ma n'eziokwu Ọ bụghị site na magazine mental_floss .
Okwu MissPres nke Ezuzu nke Week: Jerkinhead Gable site na Thomas Rosell, Nchekwa na Mississippi , Mee 18, 2012
Asụsụ nke Connie Zeigler, Ụlọ Ọrụ Indianapolis , September 3, 2011
Foto ntanetị nke Roof Styles: Gambrel Roof The Dutch Colonial Revival Amityville Ụlọ egwu na Amityville, New York bụ ebe nke igbu ọchụ jọgburu onwe ya na isiokwu nke Amityville Horror akwụkwọ na ihe nkiri banyere mmemme ọrụ. Foto © Paul Hawthorne / Getty Images
Ntughari nke colonial Dutch nke Amityville na Amityville, New York nwere ụlọ gambrel.
A na-eji okpukpu abụọ tụọ ụlọ elu dị elu. Akụkụ dị ala nke elu ụlọ dị nwayọọ. Mgbe ahụ, akụkụ elu nke elu ahụ dị n'ụdị dị elu.
A na-akpọkarị ụlọ elu chabre dị ka ọgbọ n'ihi na a na-ejikarị ụdị ụlọ a n'elu ụlọ ndị America. Ọtụtụ ndị Dutch Dutch Colonial na Dutch Colonial revival ụlọ na-agbagha elu ụlọ.
Foto ntanetị nke Roof Styles: Nnukwu Ufọk Rọf Alexander Home na Twin Palms Neighborhood, Palm Springs, California. Foto © Jackie Craven
Ekebere dị ka nku ububa, ogwe ububa na-adabata n'etiti etiti na-arịgo elu na njedebe ọ bụla. A na-ejikọta ọnụ ụlọ na-egbuke egbuke na modernism.
Ụlọ e gosipụtara ebe a nwere nru ububa. Ọ bụ ihe dị ka narị afọ nke narị afọ, nke a na-ahụkarị nke elu ụlọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihu.
Enwere ike ịchọta ụdị ụlọ ntubichi n'elu ụlọ ọrụ Googie , ma ọ bụ ọtụtụ ụlọ a chọpụtara na ụlọ iri abụọ na iri abụọ dịka Alexander Home na Palm Springs, California e gosiri ebe a.
Daggett Farmhouse, c. 1754, Colonial Saltbox Style. Photo site na Barry Winiker / Photolibrary / Getty Images (cropped)
A na-akpọ Saltbox mgbe ụfọdụ ụdị ụlọ, ụdị ụlọ, ma ọ bụ ụdị ụlọ. Ọ bụ mgbanwe nke ụlọ elu. Obere ihe bụ ebe dị n'ihu n'ihu, ihu n'okporo ámá na-eche ihu n'ihu.
Ụlọ dị n 'ụlọ dị iche iche dị iche iche, nke nwere nnukwu ụlọ ma dị elu n'azụ ụlọ ahụ-mgbe ụfọdụ n'ebe ugwu iji kpuchido ime ụlọ site n'oge ọjọọ oyi na-atụ na New England. A na-ekwu ụdị elu ụlọ ahụ ka ọ bụrụ ebe ndị nchekwa na-eji nnu mee ihe, nke a na-ejikarị eme ihe iji chekwaa nri na Colonial New England.
Ụlọ e gosipụtara n'ebe a, bụ Daggett Farmhouse, wuru na Connecticut na 1760s. A na-egosipụta ya na Greenfield Village na Henry Ford na Dearborn, Michigan.
10 Akwụkwọ na Nlekọta Ụlọ
Usoro Iwu Atọ
Chọpụta ihe gbasara kọlụm Tuscan
Eminent ngalaba - Ònye n'ezie nwere gị Home?
Kedu ihe eji ekpuchi ekpuchi?
Ọ bụrụ na m na-amụ ihe owuwu ụlọ, gịnị ka agụmakwụkwọ mahadum dị?
Bụrụ Onye Owuwu Ụlọ Owuwu
Ngwọta Ụlọ Ngwọta Na-efu Ihe Maka Ndị Na-ahụ Maka Ala Ọma Ala Haiti
Otú e si agụ Manga na-enweghị na-agba agba
Ndị Gables - Atụmatụ Ekebe si gburugburu ụwa
Kedu ihe bụ kọlụm Sọlọmọn?
Gịnị Bụ Geodesic Dome? Kedu ihe bụ Ọdịdị Space-Frame?
Ihe mere ịga ụlọ akwụkwọ ji eme ihe na atụmatụ iji meziwanye ya
Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ na-amụ banyere ịdị mma
Ụlọ Akwụkwọ Adị na Crown College
Otu esi eji ejiji French "Chez"
Oge nhazi site na 1880 rue 1890
Nanị 'Anyị' (Omenala)
Obi ojoo ojoo
The Smashing Pumpkins '' Mellon Collie na Ahụhụ Na-enweghị Nzube '
Ihe niile gbasara Nudibranchs
Black Ozi oma Otuto na ofufe Videos
Ọrụ Gọọmenti United States na-arụ na ịkpa ụmụ nwanyị agba
Akụkọ banyere Yo-Yo
Atụmatụ Atụmatụ Obere Okwu
WEB Du Bois: Ọganihu Ọganihu Ọhụrụ
Okpukpe Ọdịdị Pop na Nghọta
Gịnị Bụ Nickel Azụ?
Ntụziaka nke Kinetic Sand
A na-ele mba dị n'Africa anya na ọ dịghị mgbe ha mejupụtara
The History of the US Balance Trade
Akụkọ WWW na WWE
Ọrụ nke Islam na Ịgba Ohu n'Africa
Ọrụ Ndị Nwanyi na Shakespeare's Plays
Gịnị Mere Ndị Ochie Ji Egbu? Sayensị nke Isi Odor na Agadi